ကျစ်လစ်သော စက်တပ် linear actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > ကျစ်လစ်သော စက်တပ် linear actuator
ကျစ်လစ်သော စက်တပ် linear actuator
AOX-L ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော စက်တပ် lတွင်ear actuaသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု valves.AOX ရဲ့ အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ အယူအဆ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းs တွင် လက်တွေ့ကျတဲ့ လျှောက်လွှာများ ရှိ လက်ခံရရှိ အလွန် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု။ AOX-L ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော စက်တပ် lတွင်ear actuaသို့r များမှာ စိတ်ချရသော, လုံခွုံသော နှင့် အဆင်ပြေ, နှင့် အဆိုပါ အားသာချက်များ ၏ compatibility နှင့် အလေ့အကျင့်။
အပြေးနှုန်း: 1.5 မီလီမီတာ / s နဲ့
မော်တော်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: +135 မှအပူကာကွယ်တက်တစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (+275 တစ်° F) နှင့်အတူအတန်းအစားက F,
on-ချွတ်အမျိုးအစား: S2 - 15 မိနစ်မျှထက် ပို. 600 ကြိမ်တစ်နာရီလျှင်စတင်
ပြောင်းလဲပစ်အမျိုးအစား: S4 ကို - 50%, တစ်နာရီကို 600 အစပျိုးခြင်းမှတက်
ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှု / အော်တိုကိုင်
AOX-L ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော် linear actuator ၏ 1. Terminal နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
အမျိုးအစား terminal ကိုကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသေချာ - နွေဦးကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးပြု. သီးခြားလျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးအခန်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။
2. Valve ဆက်သွယ်မှု
ကွဲပြားခြားနားသော bracket ကကွန်နက်ရှင်မှတဆင့်, ကကွဲပြားခြားနားသောအဆို့ရှင်အဘို့အသင့်လျော်စေနိုင်ပါတယ်။ သံမဏိစကေးအကဲအမှူးသံမဏိ slider ကိုအသုံးပြုခြင်း။
AOX-L ၏စကေးစားပွဲပေါ်မှာစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော် linear actuator စောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအလိုလိုသိနှင့်အဆင်ပြေသောလမ်းညွှန်လှံတံပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ကျွန်တော်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-L ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော် linear actuator များအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-L ၏အရည်အသွေးစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော် linear actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-L ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော် linear actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: လက်ခံနိုင်ဖွယ် AOX-L ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်တော် linear actuator ၏နမူနာအမိန့်လား?
A: ဟုတ်ကဲ့, ကျနော်တို့နောက်ထပ်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, တစ်ကမ္ဘာလုံးအားလုံးအတွက်အများအပြားအေးဂျင့်ရှိသည်။
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော စက်တပ် linear actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်